Duruusta Ramadaanta: Waxybaaha Soonka Ina Jeclaysiinaya – WARSOOR
Duruusta Ramadaanta: Waxybaaha Soonka Ina Jeclaysiinaya
Waxa aanu halkan idiinku soo gudninaynaa duruus taxane noqon doonta haddii alle idmo inta Ramadaanta lagu jiro oo ku saabsan Ramadaanta oo uu idiin soo diyaariyey barnaamijka MIDHAHA DIINTA. Waxaana duruustan duubtay maktabadda Al-fajri oo ku taalla magaalada Hargeysa.
Waxa duruustan idiin soo jeedin doona sheekh Maxamed sheekh Cumar Dirir, iyadoo dersiga koobaad ee maanta uu ciwaankiisu yahay “Waxbaaha Soonka Ina Jeclaysiinaya.” Ka faa’idaysi wanaagsan. Sheekhana ilaahay ajar iyo xasanaad ha ka siiyo.
Halkan ka daawo kalmadda Duruusta Ramadaanta:
Madaxweynaha Somaliland oo Shacbiga ku Hambalyeeyey Bilasha Bisha Ramadaan
Guddida Ka Soo Kabashada Abaaraha Ee 18-May Madaxweynuhu U Magacaabay Oo Galabta Kulan Ku Yeeshay Madaxtooyada Iyo Waxyaabihii Shirkaasi laga Wada Hadlay